Ebee ka m ga-anabata ụlọ ọrụ blọọgụ m?
Fraịde, mgbe m gachara ogbako mpaghara, enwere ụfọdụ ịkparịta ụka n'networkntanet ma etinye m ọtụtụ ajụjụ.
M ga-akwagide maka ogologo oge n'ihu oge ọzọ, ma nwee olile anya ime ka ọ na - emekọrịta mmekọrịta - ọ dị ka enwere nnukwu ọchịchọ sitere na azụmaahịa mpaghara banyere otu ịkparịta ụka n'socialntanet na ịde blọgụ nwere ike isi nyere azụmahịa ha aka.
Otu n’ime ajụjụ ndị kachasị agba bụ gbasara ịtinye blog na saịtị broshuọ ụlọ ọrụ gị. Ka m buru ụzọ kwuo na agaghị m akwado dochie gị broshuọ saịtị na a blog - Ekwenyere m na ike nke a ika, ahịa, na ndammana haziri weebụ edidu.
Ndị ọrụ ga-erite uru site na mgbakwunye nke blọọgụ ụlọ ọrụ, agbanyeghị, ọ bụrụ na akụrụngwa (oge na talent) kwere na ụlọ ọrụ nyere ikike (nghọta). Ajuju bu ka esi etinye web blog na ulo oru webusaiti.
Ekwesịrị m itinye blọọgụ na saịtị m ma ọ bụ kwado ya ebe ọzọ?
N'okpuru ala: Ijikọta blọọgụ na ebe nrụọrụ weebụ gị chọrọ ka ị kwụsie ike na akara ụlọ ọrụ gị. Ọ pụtaghị na ị nweghị ike ịchị ọchị ma ọ bụ dee n'ụzọ doro anya… ọ pụtara na ndị mmadụ ga-ejikọ ọdịnaya gị na ụlọ ọrụ gị karịa ndị ọrụ na-ede ya.
Ide ihe banyere ezinụlọ, okpukpe, ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ na-enwu ọkụ (na-ede ihe na-adịghị mma) na isiokwu ụfọdụ ga-emetụta otu ụlọ ọrụ gị si eche. Ikwesiri iji ezi uche ederede iji chebe ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ akara gị.
Ọ bụrụ na a na-akwado blog gị iche iche, ọ ga-abụ nke akara aka gị ma nwee ike inye ụfọdụ nnwere onwe ide ihe. Agaghị m agwa gị ka ị họrọ nke ọzọ - ọ bụ gị ka ole ịchọrọ igosipụta ọhaneze. Na blog ụlọ ọrụ, ị kwesịrị ịnọgide na-ajụ onwe gị, "Nke a bụ ozi m chọrọ ka ụlọ ọrụ anyị na-akpakọrịta?"
Enwere uru nchọta ihe na ahụmịhe onye ọrụ na-enweta nkewapụrụ nkewa nke ọma na blọọgụ gị na weebụsaịtị gị. Ndị ahịa na atụmanya amalitela ịkụziri akwụkwọ na blọọgụ ụlọ ọrụ na ịchọ ha.
Ọ bụrụ n ’ime ọchụchọ maka“ Aha Aha Companylọ Ọrụ ”, blog ụlọ ọrụ gị ọ ga-abụ nsonaazụ? Blog nke onye ọrụ? Ndi ahia anaghi enwe obi uto? Gbalịa lee! Nke a bụ nsonaazụ ọchụchọ nke ị kwesịrị (ma nwee ike mfe) inwe.
Kedụ ka m kwesịrị isi tinyekọta blọọgụ na saịtị m?
Thezọ kachasị mfe iji mee ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gị dị ka jikọtara na ụlọ ọrụ gị bụ ịchọta ya na subdomain ma ọ bụ subdirectory blog. Ihe ngosi nke “blog” na URL ga - eme ka o doo anya na ya na Engines Search choro;
Nke ahụ kwuru, jiri ntanetị nke ụlọ ọrụ gị na ibe ụlọ gị! Agaghị m egosipụta ntanetị na ntanetị na ibe gị, kama m ga - egosipụta njikọ, ederede ederede, na eserese nke onye edemede ahụ nke ọma na ibe ụlọ na mpaghara ọdịnaya nke ya ka edere ederede.
Nchọgharị ọchụchọ agaghị ata gị ahụhụ (ọdịnaya abụọ) maka edemede - mana ị nwere ike irite uru na ọdịnaya na-agbanwe agbanwe na ibe akwụkwọ.
Mara: Adgbakwunye foto gị kwesịrị ịbụ ihe ọ bụla ị chọrọ. Ọ na-egosi n'ụzọ doro anya na nke a bụ ọdịnaya nke mmadụ dere wee ghara ide ya site na usoro mgbasa ozi ahịa ma ọ bụ mmekọrịta ọha na eze. Oh… na biko hụ na ọ B NOTGHri scripted site a ahịa ma ọ bụ mmekọrịta ọhaneze isiokwu usoro - ọ dịghị onye ga-a attentiona ntị mgbe ị na-eme.
Nwere ike iwekota a free, emeghe iyi ngwọta dị ka WordPress (Linux dabeere) ma ọ bụ ihe ASP.NET ịde blọgụ azịza nke ya 'blog' ndekọ na nchekwa data na saịtị gị, mana jigide ụdị enweghị ntụpọ site na isiokwu omenala nke na-etinye ụdị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gị.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị buru ibu, ị nwere ike ịchọ ịchọ a ụlọ ọrụ ịde blọgụ ngwọta iji jikwaa ọdịnaya ma dozie ya maka oke ịchọta na njin ọchụchọ.
Readinggụkwu na Bloglọ ọrụ ịde blọgụ:
Gịnị kpatara blog? Kedu ihe kpatara nzukọ?
Common ụlọ ọrụ ịde blọgụ ajụjụ na azịza.
Imezu a Strategy ịde blọgụ Strategy.
Tags: blognchekwa foldablog subdomainịde blọgụblog ụlọ ọrụụlọ ọrụ blog
Dee 10, 2007 na 11: 12 AM
Nkọwapụta nke ọma na - akọwa etu ị ga - esi gbochie oghere dị na weebụsaịtị na blọọgụ. Ọ dị mma izute gị na MBO Omume!
Dec 10, 2007 na 7:44 PM
Enwere m ọtụtụ ajụjụ site na ụlọ ọrụ dị iche iche gbasara ịgbakwunye blog na weebụsaịtị ụlọ ọrụ, ọtụtụ n'ime ha na-echegbu onwe ha ihe ha kwesịrị ide banyere.
Dee ihe niile! Corporate blog nwere ike ịbụ ọbụna ihe ọchị… ha nwere ike itinye ihe osise na-atọ ọchị site na ọfịs, asịrị, njakịrị wdg.
Were a anya na YouTube blog na ị ga-ahụ na ha biputere ihe niile (ọbụna ozi nke na-adịghị metụtara YouTube).
Dee 15, 2007 na 9: 04 AM
Mkpebi a bụ nsogbu nye ọtụtụ ụlọ ọrụ. Arụrụ m ọrụ maka nnukwu ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ ebe akara ahụ dị ezigbo mkpa na ọdịnaya isiokwu bụ ihe niile. Achọrọ idetu ederede ọ bụla ederede ka edezie ma kwado ya yana ya mere o siri ike ịnabata ọdịdị nke blọọgụ n'efu. Anyị chọrọ ihe blọọgụ ejikọtara ọnụ, mana nnabata ejiri nwayọ nwayọ n'ihi nsogbu ndị ụlọ ọrụ ndị a na - arụpụta n'ihi nsonaazụ blọọgụ na - abụghị njikọ. Ọ bụ ihe nwute.